आजको सुन चाँदीको मुल्यबारे आयो यस्तो खबर !! – ताजा समाचार
आजको सुन चाँदीको मुल्यबारे आयो यस्तो खबर !!
काठमाडौं । आज (बुधबार) सुनको भाउ झन् उकालो लागेको छ। सोमबार २ सय रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आजपनि २ सय रुपैयाँले बढेको हो।
आज बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला ६५ हजार ४ सय रुपैयाँ र तेजावी सुन ६५ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
आज सुनको भाउसँगै चाँदीको भाउ पनि उकालो लागेको छ । आज चाँदी प्रतितोला ७८० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ।